I-Dropbox iqala uvavanyo lwesicelo sayo esihambelana ne-Apple Silicon | Ndisuka kuMac
Esinye sezicelo ezigqwesileyo zokugcina kunye nokwabelana ngedatha efini, ekugqibeleni iqala iimvavanyo zayo ngeApple Silicon. Ngale ndlela, nangona kuthathe ixesha, ayifuni ukuba ngomnye wezicelo ezimbalwa ezingezizo ezomthonyama kunye ne-Apple chip entsha ukuba konke kuhambe kakuhle, ngo-2022 ayisayi kubakho. Intel ngaphakathi Apple Macs. Uvavanyo loguqulelo lwemveli lwesicelo sakho seMac sele luqalile.
Emva kokugxekwa ngabathengi beDropbox kunye nabasebenzisi, iimvavanyo zenguqulelo yemveli yesicelo seMac kunye nenkxaso yeApple Silicon sele iqalile. Ngo-Oktobha, iimpendulo ezisemthethweni kwizimvo kwiiforum zeDropbox zicebise ukuba iDropbox yayingenazo izicwangciso zokongeza inkxaso ye-Apple Silicon kwisicelo sayo se-Mac.Oku kuya kuqhubeka nokuxhomekeka kwi-teknoloji ye-Rosetta 2 ukuguqulela i-Intel-based application.kwezo Macs ezintsha. Okokugqibela, i-CEO yenkampani yathi iDropbox izakwamkela inkxaso yemveli yeetshiphusi ezintsha ze-Apple, Kwisiqingatha sokuqala sika-2022. Kubonakala ngathi imihla ebekiweyo iyafikelelwa. Ukuthathela ingqalelo ukuba isiqingatha sokuqala siya kude kube nguJuni.
Oku kuthetha ukuba ukuba izinto zihamba kakuhle, IRosetta 2 iya kuyekwa ukuba kwiiMacs ezintsha, izicelo zihamba kancinci, zisebenzisa kancinci iinzuzo zokusebenza kunye nokusebenza kakuhle kwamandla eApple Silicon. Oko kukuthi, kufana nokuba neFomula 1 kwaye ndiyiqhube ngokwam endaweni yengcali. Ukuba songeza kuloo nto iyimfihlo evulekileyo ukuba iDropbox ayisosona sicelo sithintelweyo kwintengiso. Igxekwa ngokufuna inkumbulo eninzi kunye "nokutya" ibhetri.
I-Dropbox iqinisekisile ukuba sele iqalile ukuvavanya usetyenziso lwemveli ngebhetshi encinci yesiseko sabasebenzisi beMac kwaye iceba ukubonelela bonke abasebenzisi ukuba. sebenzisa inguqulelo ye-beta yosetyenziso lwakho ekupheleni kukaJanuwari.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » I-Dropbox iqala uvavanyo lwesicelo sayo esihambelana ne-Apple Silicon
UJeff Wilcox, ojongene noshintsho kwi-Apple Silicon, uya kwi-Intel